WINDOWS7တွင် WI-FI ကိုဖွင့်ဖို့ကိုဘယ်လို - WINDOWS ကို - 2019
သငျသညျက Internet Explorer ကို install ရန်ကြိုးစားသောအခါတစ်ခါတစ်ရံမှားယွင်းမှုတစ်ခုတွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ဤသည်အမျိုးမျိုးသောအကြောင်းပြချက်များအတွက်ဖြစ်ပျက်, ဒါကြောင့်သူတို့ထဲကအသုံးအများဆုံးကိုကြည့်ကြကုန်အံ့, ပြီးတော့ Internet Explorer ကို 11 နဲ့ဘယ်လိုတိုက်ထုတ်မှမတပ်ဆင်အဘယ်ကြောင့်ထွက်တွက်ဆကြိုးစားပါ။
က Internet Explorer 11, တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်သူတို့၏ဖြေရှင်းချက်အတွက်အမှားအယွင်းများ၏အကြောင်းတရားများ
အဆိုပါ Windows ကို operating system ကိုနိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်ဖြည့်ဆည်းမထားဘူး
က Internet Explorer 11 က web browser ၏အောင်မြင်သောတပ်ဆင်ခြင်းများအတွက်သင်၏ operating system ထုတ်ကုန်တပ်ဆင်ရန်နိမ့်ဆုံးလိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီကြောင်းသေချာပါစေ။ IE ကို 11 SP1 သို့မဟုတ် Service Pack သို့မဟုတ်တူညီသောဝန်ဆောင်မှုဗူးနှင့်အတူ Windows Server 2008 R2 ၏အသစ်များဗားရှင်းနဲ့အတူ OS ကို Windows ကို (x32 သို့မဟုတ် x64) ၏အပေါ် installed လိမ့်မည်။
ဒါကြောင့်ပြီးသား installed ကြောင့် Windows 8 သည် Windows 8.1, Window 10 အတွက်, Windows Server 2012 R2 က်ဘ်ဘရောက်ဇာကို IE ကို 11, သည်, က install လုပ်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး, စနစ်သို့ပေါင်းစည်းကြောင်းသတိပြုရကျိုးနပ်သည်
Installer ၏မှန်ကန်သော version ကိုမသုံး
operating system ကိုဗိသုကာ (x32 သို့မဟုတ် x64) ပေါ် မူတည်. သင်သည်ဤသည်သင်တစ်ဦး 32-bit နဲ့ OS ကိုရှိပါက, သင် installer ကို browser ၏ 32-bit version ကို install လုပ်ရန်လိုအပ်သည်ဟုဆိုလိုသည် installer ကိုက Internet Explorer 11. ၏တူညီသောဗားရှင်းသုံးစွဲဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
အားလုံးလိုအပ်သော updates များကို install လုပ်မနေပါနဲ့
IE ကို 11 Installing လည်း OS က Windows အတွက်အပိုဆောင်း updates များကို၏ installation လိုအပ်သည်။ ဤအခြေအနေ၌, စနစ်ကဒီအကြောင်းသင့်သတိပေးပါလိမ့်မယ်နဲ့ Internet ၏ရှေ့မှောက်တွင်အတွက်လိုအပ်သောအစိတ်အပိုင်းများကို install လုပ်ပါလိမ့်မယ်။
anti-virus program ကို
ဒါဟာတခါတရံသင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် install လုပ်ပြီး anti-virus နဲ့ Anti-spyware software ကို, အဘရောက်ဇာကို Installer ကိုဖွင့်ဖို့ခွင့်ပြုမတွေ့ကြုံတတ်၏။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, သင် antivirus ကိုပိတ်ထားရပါမယ်နှင့်လုံခြုံရေးဆော့ဖ်ဝဲကိုထည့်သွင်းရန်ပြန်ယင်း၏အောင်မြင်သောပြီးစီးပြီးနောက်က Internet Explorer 11. ၏ installation ပြန်ကြိုးစားပါ။
ထုတ်ကုန်၏အဟောင်း version ကိုမပယ်ရှား
IE ကို 11 ၏ installation စဉ်အတွင်းကုဒ် 9S59 နှင့်အတူမှားယွင်းမှုတစ်ခုရှိခဲ့သည်လျှင်သင်သေချာကွန်ပျူတာဝဘ်ဘရောက်ဇာ၏ယခင်ဗားရှင်းလုံးဝဖယ်ရှားကြောင်းအောင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါဟာ control panel ကို အသုံးပြု. လုပ်ဆောင်နိုင်တယ်။
အသုံးပြုသူရဲ့ PC ကိုတစ်စပ်ကဒ်ကို install ပြုလုပ်လျှင်က Internet Explorer 11 Installing, ထုတ်ကုန်ပြီးစီးလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဤအခြေအနေ၌, သင်ပထမဦးဆုံးအင်တာနက်ကိုကနေဒေါင်းလုပ်လုပ်များနှင့်မှန်ကန်သောဂရပ်ဖစ်ကဒ်များအတွက်ယာဉ်မောင်းတပ်ဆင်ရန်နှင့်သာထို့နောက် Re-installation ကိုအတွက်ကို Web browser IE ကို 11 start ရမည်ဖြစ်သည်
အထက်ပါဒါ့အပြင်က Internet Explorer 11 setting အားဖြင့်ပြုသောအမှုမရနိုငျသောလူကြိုက်အများဆုံးအကြောင်းရင်းများဖြစ်ကြသည်တပ်ဆင်ခစဉ်အတွင်းပျက်ကွက်များ၏အကြောင်းရင်းကွန်ပျူတာဗိုင်းရပ်စ်များသို့မဟုတ်အခြားအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဆော့ဗ်ဝဲ၏ရှေ့မှောက်တွင်ဖြစ်ပါတယ်။
ဗီဒီယို Watch: CMD : Show Wi-Fi Password. Windows 1087XP (အောက်တိုဘာလ 2019).